उनी हुन् दुनियाँकै 'सुपर मम' यति जवान की छोरा साथमा हुँदा उमेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन !
एजेन्सी । केहि मानिसहरु उमेरविहीन हुन्छन्, विशेष गरी केहि महिलाहरु। यी चिनियाँ महिला यसको लागि जीवित उदाहरण हो। तपाईं सोच्नुहुनेछ कि उनको तपाईले सोचेको उमेरको आधापनि मिल्दैन । देख्दा मात्र अनुमान गर्न असम्भव छ । तर जब तपाईं यस महिलाको कथा पढ्नुहुनेछ, तपाईंलाई थाहा हुनेछ ।
हामी के भन्न खोजिरहेका छौं भने उनी हेर्दा र उमेरमा भिन्न छिन् । तस्विरकी यी चिनियाँ महिला, लियू येलिन अब ५० बर्ष नजिक छिन् । उनीसँगै रहेका यी युवक उनका छोरा हुन् । तर यी सुन्दर महिलाको साथमा रहेका यी युवकले विडम्बना भोगिरहेका छन् । कुरा यो हो कि मानिसहरूले उनलाई आमासँगै हिँड्दा ब्वाईफ्रेण्ड सम्झन्छन् ।
छोरा २२ वर्षीय भइसकेका छन् । यसैले मानिसहरु उनको जवानपन देखेर लाग्दैन किन छोरा उनले नै जन्माएका हुन् । यसैले मानिसहरु गल्ती गर्छन्। तर यो सत्य हो। युवक उनकै छोरा हुन् । येलिनले कुनै मेकअप नलगाएपनि उनी यती जवान देखिन्छन् कि मानिसहरूले विश्वास गर्न सक्दैनन् कि उनी २२ वर्षको बालकको आमा हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं उनको तस्वीरमा हेर्नुहुन्छ भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि मोहित सुन्दरताको अनुहारमा एक झिम्का पनि छैन। र उनको उमेरको बावजुद, उनको शरीर सुपर टोन र आकारमा छ। सोशल मिडियामा उनको तस्वीरहरु संग, लियू मानिसहरु लाई यथोचित सुन्दर हुनु को लागी आश्चर्यचकित गर्दछ।
जब उनी शपिंगमा जान्छन् र मान्छेलाई उसको उमेर बताउँछिन्, तिनीहरूले उनलाई अनौंठो प्रश्नको साथ कदर गर्दछन् । कसरी यस्तै जवान राखिराख्न सक्नुभयो ? सबैको प्रश्न यही हुन्छ ।
उनको रहस्य के हो ?
उनले आफु जवान रहिर रहनुको रहस्य खोलेकी छिन् । उनी भन्छिन् हामी सबैलाई यो लामो समयदेखि थाहा छ तर त्यही कुरा कार्यान्वयन गर्न धेरै अल्छी छौं यसैले चाँडै बढ्यौँली पाउँछौ । नियमित व्यायाम नै हाम्रो छाला जवान राख्नु र राम्रो–टोन्ड शरीर बनाउँन सक्नुको पछाडिको रहस्य हो।
उनी हरेक दिन पौडी खेल्छिन् र तौल प्रशिक्षण गर्छिन्। वास्तवमा यी महिलाले ४ घण्टामा ७ दशमलव ४५ माईलको पौडी खेल्न सक्ने आश्चर्यजनक रेकर्ड सिर्जना समेत गरेकी छिन् । यसैले उनी सुपर फिट आमाको रुपमा संसारभरी सोशल मिडियामा फैलिरहेकी छिन् ।
तपाइँ सोच्नुहुन्छ होला समय रोकिनु सम्भव छैन तर लियु येलिनको तस्विरहरुमा हेर्नुहोस् वास्तबमै समय रोकिए जस्तै छ । तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो दृढ संकल्पमा दृढ रहनुहुन्छ केही पनि असम्भव भने छैन। यसैले लियु येलिन जस्तै फिट रहनुहोस् । जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस् । यो प्रेरणादायी सामाग्री आफुले पढिसकेपछि अरुका लागि सेयर गर्नुहोस् ।
जब मस्त शिक्षिका ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग भागिन्
मात्र ४ महिनामा नै चौध किलोको भाले !
११२ वर्षसम्म जिवित महिलाको निधन, यस्तो थियो अनौठो सौख !